လက်တွေ့အကွံဉာဏျ (Layfkahi), ကျန်းမာခြင်း, ကလေးရဲ့ကျန်းမာရေး, ခရီးသွား / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
အလွန်မကြာခဏကြောင့်ကျနော်တို့အားလပ်ရက်ပေါ်မှာငါတို့ကနျြးမာရေး၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအပါဆုံးအရာကိုမေ့လျော့ခရီးစဉ်မတိုင်မီအပေါငျးတို့သကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုအတွက်အမည်ရထိုဆေးဝါးများပင်လယ်ခရီးစဉ်အတွင်းကဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုတွေ့ကြုံတတ်၏။ ပိုပြီးကြည့်ရှုပါ .. ကျနော်တို့ရိုးရှင်းစွာလမ်းပေါ်မှာအတွက်မူးယစ်ဆေးများစာရင်းကိုလုပ်ဖို့မေ့လျော့, ပြီးတော့မူးယစ်ဆေးဝါးများအပေါ်တစ်ဦးခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာထဲမှာထား ...
ကလေးတစ်ဦးမှပင်လယ်ဆေးဝါးများစာရင်း။ Read more »
လက်တွေ့အကွံဉာဏျ (Layfkahi), ခရီးသွား / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
အဆိုပါကလေးသည်တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်များနှင့်ကလေးမွေးဖွားလက်မှတ်မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ တခါတရံသငျသညျမိဘသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်ဗီဇာလိုပါတယ်။ တချို့ဗီဇာထုတ်ပေးသည့်အခါအာမခံလိုအပ်သည်။ တဖန်သင်တို့ကလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးလျှင်ပင် - ကအသုံးဝင်ပါတယ်။ အဟောင်းနှင့်အသစ်သော: နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးတစ်ဦးကနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ရှိပါတယ်။ 2010 နှစ်အထိကျဟောငျးပြဿနာ။ 14 နှစ်အရွယ်ကလေးတက် inscribe ရန်။ ထိုအခါကလေးကတဦးတည်းအပေါ်မိဘတစ်ဦးနှင့်အတူခရီးသွားဖြစ်ပါတယ် ...
အဘယ်အရာကိုစာရွက်စာတမ်းများပြည်ပမှာကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူအားလပ်ရက်များအတွက်လိုအပ်နေပါသည် Read more »
ခရီးသွား / မှစ. နံရံကပျကျွွောငာ
ဆိုဗီယက်ခေတ်ကနိုင်ငံခြားအပန်းဖြေ unionist မှအများဆုံးသုံးစွဲနိုင်ဘူဂေးရီးယားကမ်းခြေဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာရိုးရှင်းပင် non-ကြက်ငှက်တုပ်ကွေးကြက်သားအနှစ်သာရ၏လူသိစကားအပေါ်ကိုဆိုးမူကွဲဘွားမြင်လေ၏။ နှင့်ကောင်းမွန်သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်။ ရွှေ, ရွှံ့ - - အနာရောဂါငြိမ်းစရာဘူဂေးရီးယားကမ်းလွန်ပင်လယ်နက်နွေး, စင်ကြယ်သောသဲသည်။ သဲသောင်ပြင်ရာသီငါးလကြာ, နှင့်အပူကြောင့်နီးပါးဘယ်တော့မှမဖြစ် ...
ဘူလ်ဂေးရီးယားအတွက်အားလပ်ရက် Read more »
တူရကီနှင့်အဲဂုတ္တုပြည်၌အတူတူအားလပ်ရက်အပေါ် 2016 တစ်နှစ်အတွက်ပုံမှန်ထက်အပန်းဖြေစခန်းသွားကြဖို့ဘယ်မှာ - ခရီးသွားချစ်သူများခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှုရပါလိမ့်မယ်။ အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်ခက်ခဲမဟုတ်ပေမယ့်ဆန္ဒရှိလျှင်, ရုရှားယခင်နှစ်များတွင်ထက်အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာရိုက်ထည့်ပါ, ပြည်တွင်းခရီးသွားအေဂျင်စီများဘောက်ချာများရောင်းချမှုရပ်တန့်ပါပြီ။ ဤသည်ကသင့်လျော်သောအခြားရွေးချယ်စရာအဘို့အကြည့်ဖို့အချိန်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ အဆိုပါခရီးသွားဧည့်စျေးကွက်များအတွက်ဝမ်းနည်းဖြစ်ရပ်များကြားမှလျှင် ...
အဘယ်မှာရှိနွေရာသီအတွက်အားလပ်ရက်များအတွက်သွားကြဖို့ 2016 Read more »